၏သမိုင်းဘရာဇီး - ရှေ့နေများအတွက်ဘရာဇီးနှင့်ပေါ်တူဂီ! အားလုံးရှေ့နေများကိုအွန်လိုင်း။
ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်တစ်ခုတည်းသောလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံ၌ရှိသောအရာအဘယ်သူမျှမလိုအပ်တားခ်ိဳ။ အနီပျံ့သို့လွတ်လပ်ရေးအတွက်နီးပါးပြည့်စုံ ၊နှင့်အတူအနည္းဆံုးယူပါ။ေလက်တင်အမေရိကကြသည်ရင်ဆိုင်နှင့်အတူရှုပ်ထွေးတဲ့ရွေးချယ်မှု၏ခံႏိုင္တဲ့(မြန်မာ တေး၊အ တေး၊သို့မဟုတ်မ)၊အဆိုပါပေါ်တူဂီအတွက်ဘရာဇီးအဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောပြဿနာ။ ရီယိုဒီဂ်ေတွေ့လိုလို၊မမျှော်လင့်ဘဲ၊အဆိုပါပေါ်တူဂီအင်ပါယာ။ အကြောင်းရင်းသည်အဆိုပါလေယာဉ်၏တရားရုံးမှလစ္စတွက် ၁၈၀၇၊မှလွတ်မြောက်ရန်ချဉ်းကပ်မှု၏ပြင်သစ်စစ်တပ်။ တော်ဝင်ပါတီ(ခေါင်းဖြင့်အရူးဘုရင်မမာရီယာငါနှင့်သူမ၏သား ၊ယောဟန်အရောက်)အဲ့ဒီအကျဉ်းချုံးသာခြာနှင့်ရောက်ရှိရီယိုဒီဂ်ေနယိုမတ်လ ၁၈၀၈။ မင်းသားအရောက်ချက်ချင်းကြာမှုများရီယိုရဲ့အဆင့်အတန်းနှင့်စီးပွားရေး။ ဂီယာေရာင္းဝါးအဆုံးသတ်ဆောင်ကြီးသစ်ကုန်သွယ်မှုမှအထူးသဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံကနေကုန်သည်။ သင့်လျော်သောအဖွဲ့အစည်းတွေကတည်ထောင်(တော်ဝင်ဘဏ္ဍာတိုက်၊အမျိုးသားဘဏ်၊ပုံနှိပ်ရုံး၊စာကြည့်တိုက်၊စစ်ရေးအကယ်ဒမီ၊အလုပ်သမားအဖွဲ့)နှင့်အဖစ္သည္။ ၁၈၁၅ တွင်ဘရာဇီးပင်ပေးတန်းတူရပ်တည်တူဂီ၊အဖြစ်နိုင်ငံတော်အတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက်ျာဘက်။ သာ ၁၈၁၆ အာဆင် အောင်မြင်ဖို့အဂီရာဇပလ္လင်အဖြစ်၊ယောဟန်ဩ။ သူ၏ကနဦးလူကြိုက်များအတွက်ဘရာဇီးယခုအားဖြင့်မှေးမှိန်။ အ ၏၊မိမိတရားရုံးလုံ့လပတ်ဘလစ်ကန်တိုက်အခံ၊အခ်ိန္ကုန္၊ထိုဥပမာ၏အအိမ္နီးခ်င္းဆူ ၁၈၁၇ခုနှစ်တွင်၏မြောက်ဘက်တွင်ဘရာဇီးပြည်နယ်၏၊သာနှိမ်နင်းပြီးနောက်၊သုံးလသာင္း။
ဒါပေမယ့်တစ်တော်လှန်ရေးအနှံ့လန်၊ပေါ်တူဂီ၊ပြောင်းလဲအခြေအနေ။ ယောဟန်ဩရုတ်တရက်အိမ်သာ ၁၈၂၁ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်ဤခြိမ်းခြောက်ဖို့သူ၏သရဖူ။ သူကအရွက်သူ ၂၂ နှစ်အရွယ်သားကို၊ ၊အဖြစ်မရောက်။ ဤအချက်ကနေဖြစ်ရပ်များအတွက်ဘရာဇီးအလျင်အမြန်လှုပ်ရှား၊ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်သူတို့မောင်းနှင်နေကြတယ်အားဖြင့်နိုင်ငံရေးကိုအတွက်မြန်မာ။ အ သာလစ္စကြာအဆင့်များလျှော့ချဖို့ဘရာဇီးကို၎င်း၏ယခင်ကိုလိုနီအဆင့်အတန်း။ သာရီယိုဒီဂ်ေဒီခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအည့္ရင္အတွက်ရီပတ်ဘလစ်ကန်။ ကြောက်တတ်သောထိုလူငယ် စေခြင်းငှါအားခဲရာဇီးသို့လြတ္လပ္ေရးအ ခုကိုအဆိုးဝါးအမှား။ ဒါဟာအမိန့်အရောက်ပြန်သွားဖို့ဂီ'ကိုဖြည့်ဖို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေး ပညာေရး'။ ဒီ အတိအကျဘာကိုခဲ့သည်ကြောက်ရွံ။ လုပ္တယ္ ၊ အဲ့ဒီအတွက်ဘရာဇီးနှင့်။ မိမိဝန်ကြီးချုပ်အ é áႏ အီးဆေးလ်၊တစ်စိတ်အားထက်သန်ထောက်ခံဘရာဇီးလြတ္လပ္ေ။ စက်တင်ဘာလအတွက် ၁၈၂၂ တွင်၊အလွန်ကြီးစွာသောဒအစည်းမှာ (ယနေ့အဖုံး၏)၊ အီဘရာဇီး။ သုံးလကြာပြီးနောက်ဤ(အ)သူရဖူကိုဆောင်းဧကရာဇ်အဖြစ်၊ ။ တွင်း ၁၈၂၃ လက်တွေ့လိုအပ်သည်ဆောင်ရွက်မာင္းထဲကဘရာဇီးအမျိုးမျိုးသောဂီ ။ အကူအညီဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊မကြာသေးမီကရောက်လာမှမရှိပါအစောင့်တပ်ကမ်းဘက်ကနေကယ်ဆယ်ရေးဂီ၊ထိုလုပ်ငန်းသည်အဓိကအားဖြင့်ပြီးစီး၏အဆုံးအားဖြင့် ၁၈၂၃။ လွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူယခုအလုံးစုံသောတကယ်တော့၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပေါ်နိုင်ငံတော်မှအသိအမှတ်မပြုဘရာဇီး-မေလအတွက် ၁၈၂၄။ ဂီအောက်ပါအတိုင်းဝတ်စုံအဖြစ်အစောပိုင်း ၁၈၂၅။ အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ခဲ့မည်နှင့်အတူအံ့။ အစောပိုင်းနှစ်များ၏အတွေ့အကြုံအင်ပါယာများမှာနိုင်ငံရေးအရခက်ခဲ။ အဆိုပါပြဿနာများ ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ တဦးတည်းမေးခွန်းတစ်ခုအတွက်တိုက်ဒေသများအတွက်လာမယ့်အထဲကအဖုများ၊အတိုင်းအတာ၏ဧကရာဇ်၏ကိုယ္ေ။ အခြားအမျိုးတိုက်ပွဲများအကြားဇာတိ-မွေးဖွားလွတ်လပ်ဥရောပစတော့အိတ်နှင့်သစ်ရောက်ရှိလာပေါ်တူဂီ(အညီအစေရန်အတွက်စပိန်ကိုလိုနီအကြားဘရာဇီးတော်ဝင်တရားရုံး၊အရာကိုယ်တိုင်ကမှရောက်ရှိ အဖြစ်မကြာသေးမီကအဖြစ် ၁၈၀၇၊လေ့မျက်နှာကိုပေါ်တူဂီ-မလွှဲမရှောင်ဖြစ်စေတဲ့ဒသမကျေနပ်မှု။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များလာမှတစ်ဦးဦးခေါင်းအတွင်းပထမဦးဆုံးတကျိပ်နှစ်ပါးလအတွင်း။ ၁၈၂၃ တွင်အ ညီလာခံ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင်လစ်ဘရယ်ပါ é ၊မျှော်တတ်တဲ့ကိုလျှော့ချခြင်း၏ဧကရာဇ်မင်းနှင့်သူ၏ပေါ်တူဂီအကြံပေး။ တုန့်ပြန် ငါအပျော်အစည်းအ များနှင့်ဥရောပလိုင်းများသည်မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဘရာဇီး။ ၁၈၂၄ ခုနှစ်တွင်သူသည်လွတ်လပ်တဲ့လစ်ဘရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ။ အလွန်ထိရောက်စွာ၏အခြေခံအဖြစ်တိုင်းပြည်ရဲ့အစိုးရအအဆုံးတိုင်အင်ပါယာ၏အတွက် ၁၈၈၉။ ဒုတိယအ ၁၈၂၀ သည်ကာလအမျာအခက်အခဲ အင္ပါယာအတြက္ ။ ၁၈၂၆ ခုနှစ်တွင်၊အဆိုပါသေဆုံးသူ၏ဖခင်ယောဟန်သည်ခက်၊သူကအောင်မြင်ဖို့အရာဇပလ္လင်၏။ သူ၏ကြိုးပမ်းမှုမှအုပ်ချုပ်သူဥရောပတိုက်နိုင်ငံမပါဘဲပြန်ဘရာဇီးကနေဆိုးရွားထေူ ၁၈၂၈ အတွက်သူ၏ညီ င့္ဖြယ္ဆက္လက္ပူးေ။ ဤအတောအတွင်းဘရာဇီးပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာအတွက်အစစ်နှင့်အတူအာဂ်င္တီးနားအပေါ်မှာအငြင်းဒေသမှလူသိများသောလွတ်လပ်စွာအ (ဒီဘက်ခြမ်းမြစ်၏ပန်းကန်အပေါ်ရောမခိုင်းနှိုင်းအားဖြင့်လွှမ်းဤအခက်အခဲ ငါ ၏မျက်နှာသာအတွက်သူ၏ငါးနှစ်အရွယ်သားကို၊၊နှင့်ပြန်လာ၌၁၈၃၁ ခုနှစ်မှပေါ်တူဂီ။ အားလုံးဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှုများသည်ထိုမင်းဆက်တွင်ဘရာဇီးမောင်ရှင်သန်တစ်ရှုပ်ထွေးနေသောဆယ်နှစ်ခွင်ပိုက်ပြတ်တောက်အားဖြင့်မကြာခဏနှောင့်အယှက်နှင့်ပြည်တွင်းစစ်ပြည်နယ်များအတွက်အလုပ်။ ၁၈၄၀ ခုနှစ်တွင်မန် က ၁၄ နှစ်အရွယ် လာခဲ့၏။ ၁၈၄၁ ခုနှစ်တွင်သူသည်သရဖူဆောင်း။ အတွင်းလာမည့်ရာစုနှစ်တစ်ဝက် ဒုတိယထေူအလွန်အမော်ဒယ်၏နိုင်ငံတော်နှင့်စိတ်တေး။ သူသည်အကျိုးအတွက်သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ(သူဖြစ်သည်ကိုပင်အသိအမှတ်နှင့်အတူ မှတ်ချက်'ငါသည်မဧကရာဇ်၊ကျွန်တော်အဘ')။ သူသည်ခေတ်သစ်သာသူအသည်းအသန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဘရာဇီးရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ဘဏ်များ၊လမ်းနှင့်အနန်း။ အဓိကပြဿနာတစ်လျှောက်လုံး ရဲ့နန်းစံသည်ကျွန်။ အာဖရိကကျေးကျွန်ကိုဆောင်ခဲ့ကြပြီမှဘရာဇီးအတွက်ကြီးမားသောနံပါတ်များကနေ ၁၇ ရာစုနောက်ပိုင်းတွင်၊အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သကြားခင်း။ ထိုအချိန်ကအတွက်၊အ၁၈၂၀၊ကျေးကျွန်ဖွဲ့စည်းထက်ဝက်လူဦးရေ၏(အပါးလေးသန်း၊အကွောငျး.
၅၂ အနက်ရောင်၊နှစ်ဆယ်လေးဥရောပ၊ခုနစ် ၊ခုနစ်ဌာအိန္ဒိယ)။ ဒီကိန္းေတြကိုဘရာဇီးရာထူးဒုတိယသာအမေရိကန်နိုင်ငံအပေါ်အများဆုံးအရေးပေါ်အကျင့်များ၏ခေါင်းစဉ်အကြိမ်၊ကျွန်နှင့်အ အခိုင်အမာ၏ဘေးထွက်အပေါ်ရန်၊ဒါပေမယ့်အများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစိုက်ခင်းပိုင်ရှင်ဆိုလိုသည်တိုးတက်မှုနှေးကွေး။ သို့သော်ထိုကျွန်ကုန်သွယ်ရေးသည်နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာ ၁၈၅၀။ အာရုံစိုက်ပြီးတော့မှရွေ့လျားလွှတ်ပေးပြီးသားကျေးကျွန်။ အ ၁၈၇၁ နုမြူအားလုံးကျေးကျွန်ပိုင်ဆိုင်အားဖြင့်ပြည်နယ်အားလုံးမှာရှိတဲ့ကလေးမွေးဖွားမှဤနေ့စွဲကိုသိ(လွတ်လပ်သူဖြစ်ခြင်း ခွင့်ပြုသည့်အခါသူတို့၏အသက်နှစ်ဆယ်တ)။ အပြားစိုက်ခင်းပိုင်ရှင်အတိုင်းလိုက်နာစိုးရ၏ဥပမာအတွက် ၁၈၈၈ ချို့ ၇၀၀၊၀၀၀ ဖရိက-အမေရိကန်တွေနေဆဲဒဲသာဘရာဇီး။ ထိုနှစ်တွင်တွင် ဖြတ်သန်းနေတဲ့ဥပဒေ ဤကျန်ရှိသောကျွန်။ ပြုမပါဘဲလျော်ကြေးကိုသူတို့ပိုင်ရှင်တွေ၊ဒီလုပ်ရပ်၏နိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာတစ်ကူညီထောက်ပံ့အချက်တစ်ချက်အတွက်ရုတ်တရက်အဆုံးသတ်၏အဘရာဇီးအင်ပါယာ။ သော်လည်းနိ်ုင်အများစုဖြင့်မိမိဘာသာရပ်များ၊အဘယ်သူကိုမှသူ၏ရှည်လျားသောနန်းစံဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ၊ကြီးစွာသောအတိုးရှိပါတယ်၊သိသိသာသာနှင့်အစွမ်းထက်၏အိတ်ကပ်အ ရဲ့။ လစ်ရှာနယ်ချဲ့ဘရာဇီးအရှက်ကွဲလွဲလက်တင်အမေရိကအတွက်။ အဆင့်မြင့်တပ်မတော်အရာရှိဖိတ္ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စောင့်ရှောက်ဖို့စစ်ထွက်၏။ အမွတ္ရပျော်နှင့်အတူသူ့အတိုင်းကန့်သတ်ရန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများ၏အသင်းတော်။ အခုအပြင်၊ထိုအိတ်ကပ်၏အစွမ်းထက်စိုက်ခင်းပိုင်ရှင်များထိမှန်ခဲ့ကြသဖြင့်နိဗ္ဗာန်၏ကျေးကျွန်အတွက် ၁၈၈၈။ အဆိုပါရလဒ်အတွက်၊၁၈၈၉၊စစ္အာဏာဆောင်ခဲ့တစ်ဦးအလွန်ရုတ်တရက် ။ လက်ခံအခြေအနေနှင့် ။ သူနဲ့သူ့မိသားစုသို့သွားတွင်။.
D 'Besonnëch z' Importéieren, Auto - Embassy of Portugal